माइतीघरमा घन्कियो नारा ‘नेताबाट सिकेछ, पुलिस पनि बिकेछ’ ! » खबरहरुको एउटै केन्द्र
शनिबार, मंसिर १५, २०७५ १४:४५ मा प्रकाशित !
१५,मङ्सिर, काठमाडौं । कञ्चनपुरमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तलाई न्यायको माग गर्दै काठमाडौंको माईतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ । न्यायको माग गर्दै शुक्रबार पोस्टर टाँसेको विरोधमा प्रहरीले १२ जनालाई पक्राउ गरेपछि शनिबार स्वतस्फूर्त रुपमा माईतीघरमा अधिकारबादीहरु उपस्थित भएका हुन् ।
दिउँसो १२ बजे स्वतस्फूर्त रुपमा भेला भएका न्यायप्रेमी नागरिकहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र नेपाल प्रहरी विरुद्ध चर्काे नाराबाजी गरेका छन् । उनीहरुले प्रहरी पनि राजनीतिक दलका नेताहरु जस्तै विकेको भन्दै विरोध गरेका हुन् । उनीहरुले ‘नेताबाट सिकेछ प्रहरी पनि बिकेछ’ भन्दै नारा लगाएका छन् ।
शुक्रबार मात्रै निर्मलाको न्यायको लागि पोस्टर टाँस्ने क्रममा माईतीघर मण्डलाबाट ३ जना पुरुष र ९ जना महिलालाई पक्राउ गरेको थियो ।
बृत्तका अधिकारीहरुका अनुसार गृहमन्त्रालयबाट नै निर्मला पन्तको विषयमा पर्चा पम्प्लेट टाँस्नेलाई पक्राउ गर्नु भन्ने आदेश रहेकोले यस्तो गरिएको हो । पक्राउ परेका १२ जनालाई कहिले हिरासत मुक्त गराईन्छ ? भन्ने विषय अहिले नै जानकारी दिन नसकिने बृत्तका प्रहरीअधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
यस अघि सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकूल बाँस्कोटाले निर्मला पन्तको विषयमा सरकारी सञ्चारमाध्यमहरुमा कुनैपनि सामग्री प्रकाशन तथा प्रशारण नगर्न निर्देशन दिएको समचार बाहिर आएको थियो । यसमा सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले आपत्ति जनाएको भएपनि त्यसपछि समेत सरकारी सञ्चारमाध्यमहरुले यस्ता सामग्रीहरु प्रस्तुत गरेका छैनन् ।
PREVIOUS POST Previous post: ओलीलाई युवाहरुको व्यंग्य : सरकार भेटियो, न्याय भेटिएन
NEXT POST Next post: दुर्घटनामा ३ जनाको मृत्यु, ३ जना घाइते
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते शनिबार, मंसिर १५, २०७५ १४:४५
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस शनिबार, मंसिर १५, २०७५ १४:४५
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण शनिबार, मंसिर १५, २०७५ १४:४५
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी शनिबार, मंसिर १५, २०७५ १४:४५
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? शनिबार, मंसिर १५, २०७५ १४:४५